5 -ta dugsi sare ee ugu fiican London
October 19, 2021 Harrison Grace
15ka Dugsi Hoose Dhexe ee Ugu Fiican London
Hoos waa maqaal muujinaya hufnaanta 5 -ta dugsi sare ee ugu fiican London, meelaha ay joogaan, iyo aragga.
London (mid ka mid ah kuwa ugu caamsan) waa caasimada Boqortooyada Ingiriiska. Waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dunida ugu faca weyn. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay xarunta dhaqanka, dhaqaalaha, iyo gaadiidka ee Britain.
London waxay ku taallaa Koonfur -bari England, oo ku teedsan Wabiga Thames (oo 50 mayl dhinaca sare ka xiga) oo ka durugsan baddeeda Waqooyiga Badda.
Qeybta waxbarashada ee London waxay leedahay sumcad aad u wanaagsan oo ay ku leeyihiin arday badan oo ka kala yimid UK iyo adduunka oo dhan oo iskool ka dhigta halkan. Qeybta waxaa abaabula Waaxda Waxbarashada iyo Waaxda Ganacsiga - Hal -abuurka iyo Xirfadaha. Maamulka Deegaanka (LAs) ayaa mas'uul ka ah fulinta siyaasadda waxbarashada dadweynaha iyo dugsiyada gobolka heer gobol.
Waaxda waxbarashadu waxay u qaybsantaa:
Xanaanada Xannaanada kahor
5 -ta dugsi sare ee ugu fiican London, carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 18, waxbarashada dugsiga hoose waa khasab, ama iskuulka ama xarumaha xirfadaha. Kadib da'da 16, ardaydu waxay dooran karaan inay sii wataan waxbarashadooda dugsiga sare muddo laba sano ah, iyadoo ardayda badankood ay qaataan shahaadooyinka A-level. Shahaadooyinka iyo koorsooyinka kale ee London waxaa ka mid ah shahaadooyinka Golaha Waxbarashada iyo Teknolojiyadda (BTEC), International Baccalaureate (IB), iyo Cambridge Pre-U.
Labada (2) hab -dugsiyeedku waa:
Dugsiyada Dawladda iyo
Dugsiyada Madaxa Bannaan.
Dugsiyada Dawladda, oo inta badan loogu yeero “Akadeemiyada”, waxaa maamula ururo gaar loo leeyahay. Waxay helaan dhaqaalaha gobolka waxaana nidaamiya Maamulka Waxbarashada Deegaanka. Inta badan dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo loo tixgeliyo inay yihiin Dugsiyada Dawladdu waa mid dhammaystiran, Aasaaska, ama Naxwaha iyo Dugsiyada Bilaashka ah.
Dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London, dhammaan ardaydu waxay qaataan Imtixaanaadka Manhajka Qaranka (oo sidoo kale loo yaqaan SATs kuwaas oo ah, Imtixaanaadka Heerka Heerka) ee maaddooyinka muhiimka ah sida Akhriska, Tirada iyo Sayniska ee hoos yimaada Manhajka Qaranka dhammaadka Sannadka 6aad.
1 Dugsiyada Hoose Dhexe ee ugu Fiican London
2 Dugsiyada Hoose Dhexe ee ugu Fiican London
3 Dugsiyada Hoose Dhexe ee ugu Fiican London
3.1 1. St. Peter iyo St. Paul Catholic
3.2 2. St. Stephen's CE Primary School
3.3 3. Akademiyada Hoose ee East Wickham
3.4 4. St. John iyo St James Cof E Primary School
3.5 5. Dugsiga Hoose ee Torriano
3.6 6. Dugsiga Hoose Dhexe ee Belleville, Clapham
3.7 7. Dugsiga Northbridge House, Primrose Hill
3.8 8. Dugsiga Hoose ee John Ball, Blackheath
3.9 9. St. George's Church of England Primary School
3.10 10. Dugsiga Hoose ee Perrymount
3.11 11. Dugsiga Hoose ee Earlsfield
3.12 12. Dugsiga Hoose ee Chalgrove
3.13 13. St. John Vianney RC Dugsiga Hoose
3.14 14. Dugsiga Hoose ee Ambler iyo Xarunta Carruurta
3.15 15. Dugsiga Hoose Dhexe ee Coldfall
4 Su'aalaha La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Dugsiyada Hoose Dhexe ee ugu Fiican London
4.1 1. Waa imisa da'da dugsiga hoose ee London?
4.2 2. Ajnabi ma geli karaa dugsiga hoose ee dadweynaha ee London?
4.3 3. Aaggee London ku yaal ayaa leh dugsiyada hoose ee ugu fiican?
Dugsiyada Hoose Dhexe ee ugu Fiican London
London waxay leedahay dugsiyo hoose oo gaar loo leeyahay oo aad u wanaagsan oo ubadka iyo ardaydu si gaar ah wax u bartay. Si kastaba ha ahaatee, badi dugsiyada hoose waa dugsiyo "gabdho keliya" ama "wiilasha keliya".
Marka loo eego darajaynta rasmiga ah, dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo loo arko inay yihiin dugsiyo gaar loo leeyahay iyo meelahooda kala ah sida soo socota:
Dugsiga Sare ee Waqooyiga London (Harrow)
Dugsiga Kulliyadda King (Wimbledon)
Dugsiga Magaalada London ee Gabdhaha (Magaalada London)
Dugsiga Sare ee South Hampstead (Hampstead)
Jaamacadda Kuliyadda (Hampstead)
Dugsiga Gabdhaha ee James Allen (East Dulwich)
Dugsiga Sare ee Wimbledon (Wimbledon)
Guriga Maxkamadda Hampton (Hampton)
Dugsiga Sare (Highgate)
Notting Hill iyo Ealing High School (Ealing)
Amar gaar ah ma aha, dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo loo arko inay yihiin dugsiyada hoose ee gobolka waa sida soo socota:
Dugsiga Hoose ee Fox (Kensington & Chelsea)
St Joseph's RC Primary School (Brent)
Dugsiga Hoose ee Bousfield (Kensington & Chelsea)
Dugsiga Cathedral ee Badbaadiyaha St iyo St Mary Overy (Southwark)
Dugsiga Oratory London (Hammersmith & Fulham)
Dugsiga Hoose ee Kaatooligga ee St Peter (Greenwich)
Dugsiga Hoose ee Sir William Burrough (Tower Hamlets)
St. John iyo St James Church of England Primary School (Hackney)
Dugsiga Hoose ee Paxton (Lambeth)
Iyada oo aan lahayn amar gaar ah, hoosta waxaa ku yaal liiska 5 -ta dugsi sare ee ugu wanaagsan London:
St. Peter iyo St. Paul Catholic Primary School
Akademiyada Hoose ee EastWickham
St John iyo St James CofE Primary School
Dugsiga Hoose ee Torriano
Dugsiga Hoose Belleville
Dugsiga Northbridge House
Dugsiga Hoose ee John Ball
Dugsiga Hoose ee Perrymount
Dugsiga Hoose ee Earlsfield
Dugsiga Hoose ee Chalgrove
Dugsiga Hoose St. John Vianney RC
Dugsiga Hoose Ambler iyo Xarunta Carruurta
Dugsiga Hoose ee Coldfall
1. St. Peter iyo St. Paul Catholic
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Koonfurta Bari London, oo ku yaal St. Paul Wood Hill, Bromley, South East London.
Kani waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo u furan carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11 sano. Ma jiraan wax xuduud ah dugsiga. Tiro aad u badan oo ardaydu waa carruur ka tirsan Kaniisadda Kaatooligga Romaniga.
Aragtida dugsigu waa in la gaadho waxbarasho tayo leh nolosha ardayda iyada oo loo marayo waxbarid wanaagsan. Waxay baraan hoggaaminta wanaagsan iyo maamulka ardayda dhexdooda.
Booqo websaydhka: http://www.saintpeterandsaintpaulcatholicprimary.co.uk
2. St. Stephen's CE Primary School
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo ku yaal South West London, Winchester Road, Richmond upon Thames, South West London.
Waa iskuul caawiya iskaa wax u qabso oo u furan carruurta da'doodu u dhaxayso 4-11 sano. Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo u furan dhammaan jinsiyada oo aan la qabsan karin dadka xadka leh.
Dugsigan hoose wuxuu leeyahay dad aad u badan oo carruur ah oo ka soo jeeda asalka diinta ee Kaniisadda England. Dugsigan hoose wuxuu kor u qaadaa nolosha waxbarasho ee ardayda isagoo kor u qaadaya kartidooda akhriska, qorista, iyo ku lug lahaanshaha xisaabinta macquulka ah.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo siiya cunto iskuul oo lacag la'aan ah ardayda u -qalma inay helaan cuntooyinka dugsiga ee bilaashka ah.
Eeg mareegaha dugsiga: http://www.st-stephens.richmond.sch.uk
3. Akademiyada Hoose ee East Wickham
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Koonfurta Bari London, oo ku yaal Wickham Street, Bexley, South East London.
East Wickham waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ah mid ballaaran oo guulaystay, lehna jawi diiran oo daryeel leh. Waxay ku taal goob cagaaran oo qurux badan waxayna marin u leedahay dhul ballaaran oo ay wadaagaan dhismayaasha dhexdooda.
Dhabarka dugsiga waxaa ku yaal meel bannaan, taas oo dejinta dugsiga siineysa dareen aad u badan oo miyiga ah. Dhismaha dugsigu wuxuu leeyahay waddo weyn oo baalal ku leh hal dhinac. Fasallada waa kuwo waaweyn oo hawo leh.
Kani waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo u furan dhammaan jinsiyda carruurta da'doodu u dhaxayso 3-11 sano. Ma jiraan wax xuduud ah dugsiga. Carruurta ku jirta dugsigan waxay noqon karaan kuwo leh diin kasta.
Booqo websaydhka: www.ewp-tkat.org
4. St. John iyo St James Cof E Primary School
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Isabella Road, Hackney, Hackney, North East.
Waa iskuul caawiya iskaa wax u qabso oo u furan carruurta da'doodu u dhaxayso 2-11 sano. Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo u furan dhammaan jinsiyada oo aan la qabsan karin dadka xadka leh.
Eeg mareegaha dugsiga:
5. Dugsiga Hoose ee Torriano
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Waqooyiga Galbeed London ee Torriano Avenue, Kentish Town, Camden, North West London.
Waa dugsi bulsho oo u furan carruurta da'doodu u dhaxayso 3-11 sano. Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo u furan dhammaan jinsiyada oo aan la qabsan karin dadka xadka leh.
Dugsigu wuxuu u furan yahay dhammaan ardayda iyadoon loo eegayn diinta ay ka soo jeedaan. Kani waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo ay ka go'an tahay in la meel mariyo Heshiiska Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Ilmaha xuddunta qiimayaashooda asaasiga ah iyada oo la rumaysan yahay in ka -qaybgalka carruurtu ay muhiim u tahay dhammaan dhinacyada nolosha dugsiga.
Natiijada tani waa dareen amni iyo kalsooni sare loo qaaday oo u saamaxaya inay qaadaan tallaabada xigta ee u doodista xuquuqda carruurta meel kasta. Caqiidadani waxay kaloo kobcisaa dareenka bulshada, ixtiraamka, iyo mas'uuliyadda. Waxay ku dhiirri -gelisaa carruurta inay noqdaan muwaadiniin firfircoon oo xog -ogaal ah, kuwaas oo doonaya inay horumariyaan mustaqbal wanaagsan.
Eeg mareegaha dugsiga: http://www.torriano.camden.sch.uk
6. Dugsiga Hoose Dhexe ee Belleville, Clapham
Waxay ku taallaa Koonfurta London. Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo xuddun u ah Clapham 'Nappy Valley'. Belleville waa iskuul dawladeed oo leh arday aad u fiican saamiga macallinka taas oo aad dhif u ah in laga helo waaxda dawladda ee London.
Belleville waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo heerkooda ugu sarreeya ee darajaynta dugsiga lagu calaamadeeyay dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee horumarinta, heerka sare, iyo tayada.
Fiiri ah website waayo info dheeraad ah.
7. Dugsiga Northbridge House, Primrose Hill
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Waqooyiga London. Waxay leedahay hab fantastik ah oo naxariis badan xagga waxbarashada taas oo la kulmaysa wadista tacliinta iyo meel caalami ah dugsiga oo dhan.
Carruurta dhigata dugsigani waxay sidoo kale ku dhamaysan karaan isla goobtii Xannaanada kadib intaanay aadin jaamacad.
Fiiri iyaga website waayo info dheeraad ah.
8. Dugsiga Hoose ee John Ball, Blackheath
Kani waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo ku yaal Bariga London. Dugsigani wuxuu caan ku yahay dareenka muhiimada uu macalin kasta u leeyahay ilmo kasta.
John Ball waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo hubiya in ilmo kasta ammaan yahay, ammaan yahay, oo faraxsan yahay, taas oo ah hab ay adeegsadaan si ay u dhisaan aasaas adag oo loogu talagalay horumarinta waxbarasho ee ardaydooda.
9. Kaniisadda St. George ee England Dugsiga hoose
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo ku yaal Koonfurta Bari London (Coleman Road, Camberwell, Southwark, South East London si sax ah).
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo lagu tilmaamay inay yihiin iskuul caawiya iskaa wax u qabso. Waxay u furan tahay carruurta da'doodu u dhaxayso 4-11 sano.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo u furan dhammaan jinsiyada oo u shaqeeya sidii dugsi maalmeed.
Horumarka guud ee ardayda, tayada waxbaridda, badbaadada dabeecadda iyo daryeelka, hoggaaminta, iyo kartida maamul ayaa wanaagsan.
Waxaa hagaya qiyamka asaasiga ah ee ixtiraamka, guusha, iyo geesinimada, dugsigu wuxuu bixiyaa manhaj ballaadhan oo dheellitiran oo kobciya ardayda, u dabbaaldega shaqsiyadda iyo hal -abuurnimada isagoo ku hagaya guusha tacliinta.
Booqo iyaga website waayo info dheeraad ah.
10. Dugsiga Hoose ee Perrymount
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo ku yaal Sunderland Road, Forest Hill, Lewisham, South East London.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ah dugsi jaaliyadeed. Waxay aqbashaa carruurta da'doodu u dhaxayso 3-11 sano. Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo u shaqeeya sidii dugsi maalmeed.
Dugsigu wuxuu hiigsanayaa inuu abuuro jawi nabdoon, soo dhaweyn leh, iyo daryeel leh, halkaas oo dhammaantood ay yihiin kuwo xushmad leh oo si wadajir ah uga wada shaqeeya bulsho ahaan, carruurta, qoysaskooda, iyo shaqaalaha. Waxay ardayda oo dhan baraan inay qiimeeyaan bulshooyinka iyo diimaha kala duwan iyo inay ixtiraamaan oo fahmaan hab -nololeedka iyo asalka dadka. Fiiri iyaga website wixii macluumaad dheeraad ah
11. Dugsiga Hoose ee Earlsfield
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Tranmere Road, Wandsworth, South West London.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo loo arko inuu yahay dugsi beeleed. Waxay aqbashaa labada jinsiba inta u dhaxaysa da'da 3-11 sano.
Waxay dhigataa ardayda maalin kaliya. Waxaa lagu yaqaannaa waxqabadkeeda muuqda ee tacliinta. Tijaabi tan website waayo info dheeraad ah.
12. Dugsiga Hoose ee Chalgrove
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo ku yaal Beeraha Chalgrove, Finchley, Barnet, Waqooyiga London.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo loo tixgeliyo inuu yahay dugsi beeleed oo aqbala carruurta lab iyo dhedigba laga bilaabo da'da 4-11 sano. Kuma haboona kuwa xuduudda leh.
13. St. John Vianney RC Dugsiga Hoose
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo ku yaal Stanley Road, Tottenham, Haringey, North London.
Waa iskuul caawiya iskaa wax u qabso, kaas oo qaabeeya dhammaan jinsiyada laga bilaabo da'da 3-11 sano. Waa mid ka mid ah iskuulada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo maamula dugsi maalmeed oo leh darajo waxqabad oo heer sare ah xagga tacliinta, hoggaaminta.
Dugsigu wuxuu kobciyaa horumarinta caqiidada Katooliga iyada oo loo marayo barista qiyamka injiilka gudaha deegaan daryeel leh halkaas oo shaqsi kasta lagu qiimeeyo laguna ixtiraamo. Sidaas darteed, horumarinta hadiyadaha dhammaan ardaydooda si ay sare ugu qaadaan awooddooda si ay u gaaraan heerkooda ugu sarreeya.
14. Dugsiga Hoose ee Ambler iyo Xarunta Carruurta
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo ku yaal Blackstock Road, Finsbury Park, Islington, North London.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo loo arko inuu yahay dugsi beeleed. Waxay aqbashaa da 'kasta laga bilaabo 3-11 sano. Waxay u shaqaysaa sidii dugsi maalmeed.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu wanaagsan London oo ardaydoodu ay ka helaan tayo aad u wanaagsan macallimiintooda.
Dugsigan hoose ee ugu fiican London, macallimiintu waxay isku dayaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ardaydooda iyagoo hubinaya fahamka ardayga si nidaamsan, u aqoonsanaya khaladaadkooda si sax ah, iyo inay siiyaan jawaab cad oo toos ah ardaydooda.
15. Dugsiga Hoose Dhexe ee Coldfall
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican London oo ku yaal Coldfall Avenue, Muswell Hill, Haringey, North London.
Waa mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London oo loo arko inuu yahay dugsi beeleed. Waxay aqbashaa carruurta da'doodu u dhaxayso 3-11 sano. Waxay u shaqaysaa sidii dugsi maalmeed.
Dugsigu wuxuu macalimiinta ka haystaa tayo wax -ku -ool ah wuxuuna isku dayaa inuu ardayda u aasaaso aasaaska tacliineed ee wanaagsan iyada oo la adeegsanayo aalada waxbaridda, hoggaaminta, iyo fasallada maareynta, oo lagu beero nabadgelyada akhlaaqda wanaagsan iyo amniga ardayda.
Tijaabi tan website waayo info dheeraad ah.
Su'aalaha La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Dugsiyada Hoose Dhexe ee ugu Fiican London
1. Waa imisa da'da dugsiga hoose ee London?
A: Da'da dugsiga hoose ee London waa 4-11 sano.
2. Qof ajnabi ah ma heli karaa oggolaanshaha dugsiga hoose ee dadweynaha ee London?
A: Ilaa 31ka Diseembar 2020, dhammaan Aagga Dhaqaalaha Yurub ('EEA'), iyo carruurta dhalashada Switzerland, waxay xaq u leeyihiin xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo sharciga socdaalka ee UK, inay soo galaan waddanka si ay u helaan dugsi.
Qof kasta oo ah EEA ama dhalashada Switzerland ee yimid UK markay ahayd 31 Diseembar 2020 wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado Qorshaha Dejinta Midowga Yurub, wuxuuna sii wadi karaa inuu wax ka barto dugsiyada ku yaal London iyo England guud ahaan sida ay hadda sameeyaan haddii codsigooda lagu guuleysto.
Xorriyadda u -socodka UK ee muwaadiniinta EEA iyo Swiss -ka waxay dhammaatay dhammaadka 2020. EEA (muwaadiniinta Irish oo dhinac ah) iyo carruurta dhalashada Swiss ee soo galaya UK kadib dhammaadka 2020 ayaa hadda loola dhaqmaa si la mid ah dadka kale ee ajnabiga ah.
Tan micnaheedu waxaa weeye in aysan mar dambe xaq u yeelan doonin inay dalka soo galaan si ay u helaan dugsi ay dowladdu maalgeliso ilaa ay ka hoos galaan qaybaha socdaalka ee soo socda. Carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano waxay geli karaan UK, iyagoo ku tiirsan muwaadin ajnabi ah oo degay xaaladda Boqortooyada Midowday, iyada oo ku tiirsan waalidkood (waalidkood) oo ku sugan UK fiisaha shaqada ama fiisaha ardayga, ama qayb ka ah ee qoyska soo galaya ama deggan UK ee ku hoos jira dariiqa socdaalka ee muwaadiniinta Britishka ah (Dibadaha) iyo dadka ku tiirsan.
Carruurtan ku tiirsan waxay xaq u leeyihiin inay dalka soo galaan waxayna wax ka baran karaan iskuul ay dowladdu maalgeliso ama madaxbannaan mar UK. Carruurta ku tiirsan ee aan imaan UK isla waqtiga waalidkood waxay u baahan doonaan inay si gooni ah u dalbadaan fiiso sida ilmo ku tiirsan.
3. Aaggee London ku yaal ayaa leh dugsiyada hoose ee ugu fiican?
A: Taariikhdu waxay sheegaysaa in Kensington iyo Chelsea ay leeyihiin dugsiyada hoose dhexe ee ugu fiican London. Qiimayntu waxay muujinaysaa in in ka badan saddex-meelood laba (67%) dugsiyada aagga ah uu Ofsted ku qiimeeyay mid aad u fiican.
Tan waxaa lagu arkay sicirka guryaha, iyada oo guryaha aaggu ay yihiin kuwo aad qaali u ah - sidaas darteedna ka dhigaya xaafadda mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee lagu noolaado England.
Rushmoor iyo Woking ayaa galay kaalinta labaad, iyadoo kala bar (50%) dugsiyada labada degmo lagu qiimeeyay inay yihiin kuwo aad u fiican.
Gabagabadii, waxaa London ka jira tiro ka mid ah dugsiyada hoose ee ugu fiican oo bixiya waxbarasho tayo leh laakiin qaali ah.
10 Tilmaamood oo ku aaddan Deganaanshaha Ardayda Caalamiga ah ee ugu Fiican Bartamaha London
Deeqaha Master's Engineering ee Ardayda Caalamiga ah ee Magaalada, Jaamacadda London 2020
Bachelor Degree City University of London Deeqaha Hogaamiyaasha Caalamiga ee UK, 2019
Sida loo Codso Jaamacadaha UK - Step by Step Guide
12 Dugsiyada injineernimada ugufiican aduunka oo leh deeqo waxbarasho
Dugsiyada hoose ee ugu fiican London
Previous Post:10 Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha
Post Next:Cannabisku ma kaa caawin karaa inaad si fiican wax u barato?